खुसीको खबर: पाल्पामा मिर्गौला रोगको निशुल्क डायलाइसिस सेवा सुरु – कामना डेली
On २०७५ फाल्गुन ३०, बिहीबार २०:४६
कामना डेली,पाल्पा। विश्व मृगौला दिवसको अवसर पारेर पाल्पामा मृगौला पीडितहहरुको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै पहिलो पटक हेमोडायलाईसिस सेवा सुरु भएको छ । लुम्बिनी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल प्रभाषले बिहिवार देखी उक्त सेवा सुरु गरेको हो । पत्रकार सम्मेलन मार्फत सेवा सुरु गरिएको औपचारिक जानकारी गराईएको हो। पाल्पामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लुम्बिनी मेडिकलका कार्यकारी अध्यक्ष गोपालबहादुर पोखरेलले पाल्पामा पहिलोपटक मिर्गौला रोगको निशुल्क डायलाइसिस सेवा सुरु गरिएको बताए।
‘ हामीले आजबाट डायलासिस सेवा नियमित रुपमा सञ्चालनमा ल्याएका छौं, उनले भने ‘यहा बाट हामीले विपन्न परिवारलाई राहत पुगोस् भन्ने सोचका साथ सेवा सुरु गरेका हौं ।’
’डा. तिलचन पाण्डेले मृगौला रोगीहरुका लागि हप्तामा तीन पटकसम्म डायलाइसिस सेवा आवश्यक पर्न सक्ने बताए । ‘कन्भेसन डायलाइसिसमा ३ पटकसम्म पनि सेवा दिन पर्छ । एउटा व्यक्तिलाई ४ देखी ६ घण्टासम्म राखेर सेवा दिनुपर्छ । अनकन्ट्रोल डायविटिजका कारण मृगौलामा समस्या पर्न सक्छ । मानिसहरुले नबुझिकन नदुख्ने औषधी खाँदा, ग्यास्टीकको औषधी धेरै सेवन गर्दा यस्तो हुन सक्छ । हामीले ब्ल सुगर, मृगौला एलुमिन वा टक्सीन बढेको छ छैन पनि हेर्छौं ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका सभापति राजेशकुमार अर्यालले नियमित रुपमा स्वास्थ्य उपचार लिनेहरुका लागि निकै राम्रो पहल भएको बताए । उनले लुम्बिनी मेडिकल कलेजले नाफा उन्मुख भएर सेवा प्रवाह गर्नुभन्दा पनि बृहत्तर जनतालाई ध्यानमा राखेर सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरे । पहाडी जिल्लाहरु पाल्पासँगै गुल्मी, अर्धाखाँची, स्याङ्जा, पर्वत, बाग्लुङका बिरामीहरुलाई लक्षित गरेर सेवा सुरु गरेको मेडिकलले जनाएको छ ।
मृगौला रोगबाट कसरी बच्ने ?
१) प्रशस्त पानी पिउने
नियमित रुपमा प्रशस्त पानी नपिउनाले सबैभन्दा पहिलो खराब प्रभाव मृगोलामा पर्छ। पानीको अभावले मृगौलाले रगत सफा गरेर अनावश्यक फोहोर शरीरबाट फ्याँक्न गाह्रो गर्छ जसको परिणाम शरीरमा विषाक्त तत्व जम्मा भई स्वास्थ्य बिर्गाने काम गर्दछ।
२) नुनको कम प्रयोग
अत्यधिक नुनको प्रयोगले रक्त्तचाप वढाउनुका साथै मृगौलामा नराम्रो दबाब पार्छ। दिनमा ५ ग्राम भन्दा वढी नुनको प्योग स्वास्थ्यको लागि हानिकारक सावित भएको छ।
३) धुम्रपान र मदिरा त्याग्ने
धुम्रपान र धेरै जाँड रक्सी सेवनले मृगौलामा थप नकारात्मक असर पार्छ। कुलतको बाटो छाडी स्वस्थ रहन सिकौं।
४) मासुको बढी प्रयोग
नियमित रुपमा बढी मासु खाने व्यक्तिको मृगौलामा नराम्रो असर पर्छ । अत्यधिा मासुको प्रयोगले थप अन्य रोगहरु निम्त्याउने गर्दछ।
५) चिया कफीको वढी सेवन
चिया कफीले शरीरमा क्याफिनको मात्रा वढाउँछ जसले मृगौलालाई भार पर्छ। यस्ता पेय पदार्थको कम सेवन गर्ने बानी बसाल्नु नै मृगौलालाई स्वस्थ राख्नु हो।
यसैगरी जथाभावी आर्यूवेद वा एलोपेथिक औषधी, पेनकिलरको प्रयोग नगर्ने र दैनिक ब्यायाम गर्नु नै स्वस्थ र निरोगी जीवन बिताउने सुत्र हो।
मधुमेह र उच्च रक्त्तचाप भएका बिरामीको लागि मृगौलाको रोग सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो। मनलाई शान्त र आनन्द महसुस गराउन एकदम धेरै जरुरी छ।
पुनः युरोपमा फैलियो कोरोना, डब्लूएचओद्वारा चिन्ता व्यक्त